DEG DEG+DAAWO: Xildhibaanadii ugu badnaa oo kahor yimi Deni & Saadiq Garaad oo horboodaya – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandDEG DEG+DAAWO: Xildhibaanadii ugu badnaa oo kahor yimi Deni & Saadiq Garaad oo horboodaya
July 22, 2019 Ali Osman Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 6
Mudanayaal katirsan baarlamaanka Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe, ayaa daaha ka rogay in aysan sharci aheyn dadkii ay xirtay dawladda Puntland, kuna xirtay magaalada Boosaaso.
Mudanayaashan waxay cadeeyeen in uusan jirin sharci dhigaya in lacagta ka timaada dawladda Faderaalka Soomaaliya lagu muteysan karro xabsi, waxay sheegeen in muwaadinku xaq u leeyahay in uu ka hadli karro arrimaha siyaasadda, aana loo xiri karin.
Xildhibaanada oo wariyayaasha kula hadlay Garoowe, waxay kaloo cadeeyeen in ay arrintan u gudbiyeen Guddoonka baarlamaanka Puntland, balse isku dayo lagu sii deynayay odayaasha, culumada ay guuldareysteen.
Yarta malagu haayaa,
Budhleyn malagu haayaa,
Maanta malagu haayaa,
Armaajo ma idin haayaa,
Azxaabta Reer Budhleyn, Jaceylkii Farmaajo intuu kusii hadhay Welli ma idin hayaa? Kkkkkkkkkkkk Xumadii Armaajo Maanta sow idinmey qaban? Kkkkk
Budhleyn ismoodka lama hadlayo. Reer Budhleynka dhabta ah ayay su’aasheydu kubsocotaa! Kkkkkkk
Xukuumad kasta oo xabsi iyo xadhig is miciin badda mustaqbal ma yeelato sida taariikhda ku duugan. Meel daran bay ku dambeysaa aakhirka. Biixi ayaa tusaale fiican noogu filan oo lugtii kali ahayd ee uu ismaamulka jabhadda SNM ku taagnaa xabsi iyo xadhig iyo cadaadis ku jaray. Deni na dhabbadaas ayuu hadda cagta saaray oo ama isaga ama Puntland mid baa u aayi doona muddo aan fogayn.
“Dastuurka aan ku dhaartay baan ilaalinayaa” waa qiilka jaban ee lagu garto talis kasta oo runta iyo xaqa ka galgalanaya. Dal mise dagal dastuur lagu ma maamulo ee waxaa lagu maamulaa sharci sugan oo xeeraar iyo qawaaniin dagsan ka kooban ee leh maxkamado ku dhaqan galiya darajooyiinka iyo qaybaha ay ku kala yaalaan. Ciddii lagu eedeyanayo in ay sharciga burisay waa in nadaamka maxkamadeynta loo maro ee ma aha in uu madaxweynuhu mise kuxigeenkiisu toos u soo daakhilaan.
“Budhleyn ismoodka lama hadlayo. Reer Budhleynka dhabta ah ayay su’aasheydu kubsocotaa! Kkkkkkk”
Xantaadan dadbani qiilka aad u adeegsanayso waa mid aan lahayn lugo uu isku taagi karo sababta oo ah calal aqal Puntland si wada jir ah ayay beelaha ka koobani dhammaantoodu u wada yagleesheen. Ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ayay na si xalaal ah ugu wada dhisteen.
Kuweenan beelahaas iyo geyiga ba ka dhashay ee aad ku dhega hadlayso “by default” ayaynu Puntlander u nahay ee la soco Ahmedoow. Waa dhacdo “automatic” ah. Puntland waa Woqooyi Bari oo anagu na Woqooyi Bari baynu ku naalnaa. Bal adiga oo reer Woqooyi Galbeed ah maxaa kaaga shan iyo toban ah oo yaa rasmi kuu siiyay xaqa aad ku kala tilmaamayso?
Highwaygii baan ka bixi gaadhay qosol daraadiis sxb!
Binti girl, marka daacad loo hadlo iydaa khaladka leh oo halkaa is dhigtay. inta ay aad u kacsatay ayay nayroobi tagtay la shirtay beesha caalamka tidhi wixii Lacag ah Xaar maajo & khayr laawe iigu soo dhiiba.
Xaar maajo & khayr laawe shaqadoodii ayay wataan, 3da habrood ee maxamuud saleeban kolba mid $100 u dir 2 kale ha xanaaqaan, awalna meesha maamul cago ku taagan kama jirin, kala yaaca dhabayo weeyaan qorshahoodu.
Haduu siidaayo, waa in uu iscasilaa. taasi waxay keeneysaa ammaan darro, iyo kala dambeyn la,aan waa in Xabsi ka fog Bosaso lagu xiraa. qof u tegikaraana jirin.